Hoggaamiyihii Burcada disha Soomaalida Koonfur Afrika oo la xiray – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Booliska Koonfur Afrika ayaa gacanta ku dhigay hoggaamiyihii burcadda hubeysan ee dilalka u geysata ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkaasi, kadib howl-gallo ay ka sameeyeen duleedka magaalada Port Elezapeth.
Ninkaan oo caan ka ah Koonfur Afrika, islamarkaana madax u ahaa burcadda dadka ajaaniibta ah ee Soomaalida ku jirto disha ayaa laga soo qabtay eegaanka Motherwell.
Saraakiisha Booliiska ayaa sheegay in haatan ay baaritaano dheeraad ah ay ku socdaan ninkan oo loo heysto dilal iyo boob loo geystay muwaadiniin Soomaaliyeed.
Qaar ka mid ah Soomaalida ku dhaqan dalka Koonfur Afrika ayaa soo dhoweeyey qabashada ninkan oo ay dhibaato weyn ku qabeen ganacsatadu.
Sidoo kale qabashadiisa ayaa kusoo aadeysa, iyada oo xalay dalkaas dil iyo dhaawac loogu geysatay muwaadiniin Soomaaliyeed.
Inta badan waxaa dalkaasi Koonfur Afrika ka dhaca dilal qorsheysan iyo boob hantiyeed oo loo geysto Soomaalida oo ganacsiyo kala duwan ku leh magaalooyinka dalkaasi.